DAI NDAKAZIVA HAITUNGAMIRI - CHISHONA
Nhemia haana kuzvibvuma kuti mari yaive muhomwe make yakange iri yake. Mabhero ake efodya akange amuburitsira mari yaakange asati ambobata muupenyu hwake hwese.
Aisaziva kuti otangira papi nokuti kukura kwake kwose aingove munhu aitambura.Baba vake vakange vashaika aine makore mashanu achibva akura achichengetwa naamai vake pamwechete nemadzikoma ake maviri nehanzvadzi imwechete.
“Ndoda kumborova kana ka$20 ndimbogeza dikita rokurima fodya. Mudzimai haafanire kundibvunza kuti mari yakafamba sei nokuti ndini baba vemba,” murume akazvisimbisa, akagara kumashure-shure kwekombi yaiita nhange –mutange nedzimwe kubva kudzimba dzinotengeserwa fodya, yakananga mukati meguta reHarare.
Vanhu vazhinji vaive mukombi iyi vaivewo varimi vakange vachibva kunotengesa fodya yavo. Zviso zvavo zvairatidza kunyevenuka nemari dzavainge vapiwa pakutengesa fodya yavo.
“Madhara angu zvakabhadhara ka izvi?” akadaro kondakita wekombi akatarisana navabereki vakange vari mumotokari.
“Mufana kurima fodya kunorwadza regedza timbofarawo wena,” akapindura mumwe murume wechikuru aive akagara padyo naNhemia.
“Bhawa rinonakidza muHarare nderipi mufana wangu?” mukuru uyu akaenderera mberi nehurukuro yake nakondakita.
“Ha-a! Mudhara mabhawa emuHarare hamungaapedzi. Munoda remaLager here kana ramasese?”
“Masese ndeokumusha mufana. Nhasi toda kumborova ihwo hutsuku hwamaheadmaster,” akapindura mukuru uyu, vanhu vose vaive mumotokari vachibva vapwatika nokuseka.
Nechomumwoyo Nhemia akafara chaizvo kuziva kuti akange awana mumwe wake wokufambidzana naye kunyangwe zvavo vaviri ava vakange vasingazivane. Akatoona kuti zano raive rokutaudza mukuru uyu motokari isati yasvika muguta.
“Mudhara kwenyu ndokupiko? Ini ndiri pano paChivhu apa,” akabvunza Nhemia.
“Inga tiri vamwe ini ndiri muWiltshire papurazi raTinago. Ndini Tinago wacho,” mukuru akapindura nomufaro achiziva kuti naiyewo akange awana munhu wokumusha wokufambidzana naye.
“Saka uri kufamba sei ini ndapedzerwa asi pane zvandange ndichida kumbotsvaga paMupedzanhamo apa. Zvihembe zvokuti vana ambuya vako vapfeke kumusha uko,” vakadaro vaTinago.
“Regai tidzike tese ndimbonhonga-nhonga mbatya dzavana,” akapindura Nhemia.
Vaviri vakadzika kombi pazambuko riri munaSimon Mazorodze wave kupinda muguta. Vakafamba vakanga kuMupedzanhamo vachikurukura nyaya dzakasiya-siyana dzinosanganisira budiriro yavarimi vakange vave kurima fodya.
“Saka kana uri soko mukanya uri muzukuru wangu chaiye, zvino nhai Jena zuva zvaravira kudai wati tingafambe nousiku here kudzokera kumusha?” vaTinago vakabvunza Nhemia.
“Mabhazi achiri kuwanikwa zvawo, asi hameno kuti manga mati tiite sei sekuru?” akapindura Nhemia.
“Ndanga ndati tizomboita rimwe rimwe, pokurara hapanetsi. Harare yakavakwa ndichiona, ndinoziva zvandichaita.Makare kwangu ndichiri kushandira muno ndisu tainzi vanamukoma Harare. Hapana kana tsotsi raindibata nokuti ndairova zvibhakera zvinopfuta mwoto,” vakaenderera VaTinago.
“Ini ndanga ndichitotya kufamba ndega, zvino zvatave vaviri hapana chinotyisa. Ngatichitengai mbatya dzedu kana tapedza toenda kuMagaba todya sadza pamwe nokunwa,” mukomana akapindura.
“Ini ndiwanzofarira bhawa repaRarwe nokuti ndinoziva hakuna matsotsi akawanda. Kana usina dambudziko nazvo tinoenda wombonoonawo zvimachukasi zvemuHarare zvinege zviripo!” mukuru akataura achinyemwerera.
“Asi zvasekuru hamukuri chokwadi, nanhasi muchiri kungofunga nezvevasikana makaita sei?” akapindura achiseka Nhemia.
Vapedza kutenga-tenga zvavaida vaviri ndokukwira kombi yaipinda muguta vachibva vananga paimba yokudyira iri pachiteshi chezvitima.
Vanhu vazhinji vakange vari pachiteshi ichi vaimirira chitima chaienda kuBulawayo manheru. Vaivewo nemikwende yakafanana neyavaTinago naNhemiah.Vaviri vakasvikotenga sadza ravo pamwe nehwahwa hwemabhodhoro, ndokugara zvavo paberere paifura mhepo.
Vakagara padyo nemamwe madzimai echidiki maviri aikurukura nezvoupenyu hwavo.
“Ini zvemba zvakabvirondiramba ndichine mwana mumwechete, saka kana nanhasi ndinogara ndega ndichizviitira tunhu twangu. Mufunge kuti pasipoti chairo murume wangu akange asingade kuti nditore hanzi unozoita misikanzwa kana uchinge waenda kunohodha, asikana varume ava!” akadaro mumwe wevakadzi ava vachirova chikuwe nomumwe wake.
Nechomumoyo vaTinago vakabva vati dzawira mutswanda.
“Manje ini wangu murume paakangoshaika chete ndakabva ndasvipa mate kuti pfu-u-u, handife ndakaroorwa zvekare nokuti varume vanonetsa veduwe!” mumwe wacho akatsigira.
“Musada kunyeperana madzimai, musha usina murumwe hauna chiremerera,” vakaitenga nyaya vaTinago.
“Heede-e-e- urii-i!Inga munotozvirwariwo nhai baba imi, mukasvika pamba pangu ini muHillside umo munotofunga kuti pamwe hameno mumwe muzvinabhizimusi anogara ipapo!” akataura mudzimai uyu akanongedza kumabvazuva kwaive nemusha weHillside.
“Uko kunongova kutaura hakozve panavamwe, chokwadi ndechokuti panenguva yamunotombofungawo kuti dai ndiine murume. Ko kuzongogara vamwe tichinwa chii chiri kunetsa?” mukuru akataura achiita chaizvo zvaaita panguva yake youjaya.
“H-a-a kana musazvinetsa zvenyu takaguta isu,” akapindura mumwe wevakadzi vaye asi noumwe mwoyo achiratidza kuti zvinwiwa zvacho zvakange zvatononoka.
“Amboti muri kunetsa ndiyani? ICastle here kana kuti iEagle? Muzukuru ita uvatengere?” vakadaro VaTinago.
“Hezvoka Merjury, hanzi gondo here kana kuti Castle, ini hangu ndinonwa maReds” akapindura mumwe wevakadzi ava.
“E-e-eh, muzukuru ndiwe wotomhanya unotorera vanaambuya vako zvavanonwa, mati rinonzi chii zviya?Kana kuti chiperekedzanai nomuzukuru wenyu,” harahwa yakataura ichizvomora $50 yakabatana pakati pesumbu remari yaive muhomwe yomukati mebhachi.
“Iwe Lizzy,” akadaidzira Merjury “Ubve wanditengerawo airtime, ndinzwe kuti makanika watasiya kumba apedza here kugadzira motokari yangu?”.
Hazvina kutora nguva refu kuti hwahwa hupinde mumusoro, mari ichibva yatanga kupfachurwa. Vasikana vakange voitwa mukomberanwa garira nokoko. Raiti risati rapera doro, Nhemia anenge atove pakaunda kare, rinochipera zvekare janha rinenge riri ravaTinago.
Zviya zvokubvunza chenji zvinowanzoitwa nemunhu anenge aine mari shoma. Pauviri hwavo, vaTinago naNhemia vaive nemari yaipfuura zviuru zvishanu zvemadhora.
“Saka nhasi munotiendesaka kumba kwenyuka nhai medhemu?,” vaTinago vakabvunza vakatarisa mumaziso aMerjury.
“Kana kufamba netsoka tinofamba paHillside padhuze, chete kuchakachena saka handidi kuti vana vangu vafungidzire kuti ndiri kuita zvechipfambi,” akapindura Merjury.
Akaenderera mberi Merjury, achitaura nenzwi rekuzemwaira, “Dady kana tasvika kumba mundirangaridze mugoshevha ndebvu dzenyu dzakurisa.” Kuzovadaro vaTinago vakabva vaita kunge mucheche wepamaoko.Mukuru aibvunda nokuona runako rwaive naMerjury. Zvechembere yavakange vasiya kumusha rwakange rwave rumwe rungano.
“Shuwa here nhai dhiya,” vakadaro vaTinago, shasha irikudya nyika rutivi muguta reHarare.
Vakapamhidzira, “Unoziva kana kukubhadharira mombe makumi maviri ndinobhadhara ini? Paujaya hwangu chaihwo handina kumbosangana netsvarakadenga yakaita sewe medhemu,”.
“Manje handisi kusara, handiti mati kumusha kwenyu kuChivhu?” akabvunza Merjury achiedza kutsvaga mazano okufadza harahwa kuti isaomera kubuditsa mari.
“Asi kana tasvika kumusha kuna amaiguru hatidi anozonopinduka ave kuti handimuzivi,” akadaro Merjury achidhonza hwahwa hwake hwaive mukabhodhoro kakazvimba padumbu kunge dhadha.
“Iwe ndiwe vanyachide vangu, kumunda hauende, unomuka nguva yaunoda, kana kugeza chaiko vazukuru vanenge vachinokucherera mvura iwe wakagara pasi pemumvuri,” vakadaro VaTinago.
Merjury nokungwara kwake aiziva zvaidiwa neharahwa dzinenge vana VaTinago. Akabva avatsvoda padama achivazevezera munzeve.Akati zvino aikwidza ndege yemashanga harahwa yapaChivhu.
“Dady ndiri kutorevesa, mukadira mafuta chete chokwadi ndinokuperedzai nemotokari yangu kunosvika pamba chaipo. Mumbonyatsonovavhundutsira paruzevha kuti ndauya naye tombana wangu,” akadaro Merjury akatarisa mumaziso avaTinago avo vakange vave kupenga norudo zvino.
Uyuwo Nhemia zvomudhorobha akange asina kuzvijairai, zvikuru sei nyaya dzechijoki. Aitove hutsi chaihwo. Zvaitomushamisawo chaizvo kuti nyenyedzi yomukadzi inenge Lizzy yainge yachivei pamunhu akaita saye? Aitonyara chaizvo vanhu pavaiipfuura nepaari vachiona akakorekerwa ruoko muhuro naLizzy. Imwe pfungwa yake ndiyo yaiti aigona kungoona mudzimai wake amai vaBhebhina vati pfacha kusvika.
“Saka kwenyu makakohwa sezvatakaita kwedu here gore rino, nhai vahanzvadzi?” Nhemia akabvunza Lizzy.
“Iwe ndambokutaurira kuti handidi zvokunzi vahanzvadzi. Ndinonzi Lizzy ini, nyaya dzako dzokurima dzisingaperi dzakaita sei? Ndave kuzokusiya wega ukaramba uchiita zvinobhowa,” akadaro Lizzy achinyepedzera kunge agumbuka.
“Haiwa, sori wena Rizi,” akadembetera Nhemia.
“Taurawo dzimwe nyaya dzinonakidza kwete dzako dzemombe, maricho nekurima fodya, kana uchida kuti tiwirirane. Ungakundwe nekamudhara ako kari kuita nyambo dzinonakidza,” akadaro Lizzy achikutura bhodhoro rehwahwa hwaainwa, achibva aritambidza Nhemia kuti atengerwe rimwe.
Hwahwa hwakanwiwa, chikafu chemhando nemhando chikadyiwa, vaive nerombo rakanaka vakaita bira raanakamba nokutengerwa hwahwa musi uyu.
Ukuwo kumusha ambuya vaTofarirepi, mudzimai wavaTinago, havana kurara vachifunga kuzochapfanyura zvikafu zvavaitarisira kuti zvaizounzwa nomurume wavo. Masvondo maviri okutengesa fodya akange akwana saka vaitarisira murume wavo chero nguva.
Mutyairi wetaxi akaisimudza kubva pachiteshi chezvitima yakananga kumusha weHillside uri kumabvazuva kweguta reHarare. Merjury ndiye akange akagara pamberi achiratidza mutyairi nzira.
“Kana tasvika wopaka panze ndoda kuona kuti imwe hanzvadzi yangu inonetsa haipo here? Mufunge anongouuya kumba kwangu paanodira,” Merjury akataurisa kuti munhu wese aive mumotokari azvinzwe.
“Iwe tezvara vangu ndinovatengera hwahwa kana vachinwa chii chiri kukunetsa iwe?” vaTinago vakataura nenzwi rairatidza kuti mukuru akange achidhakwa zvino.
Taxi yakasvikonomira kunze kwegedhi Merjury ndokubuda achiti; “Ndipei five minutes chete ndione kuti haamo here?”
Haanawo kupedzawo nguva yakareba achibva adzoka.
“Ngatipindei hedu, hanzi auya asi anenge arara kudhara. Asi zvotoitaka totorara mudzimba dziri kuno kunze idzi, kuitira kuti mangwana paanomuka asakuonei. Driver waita shamwari tobatana,” akadaro Merjury achibatsira vaenzi vake kutakura mikwende yavaive nayo.
“Iwe Lizzy nomuzukuru morara mumba maPaida umo.Asi mangwana kuseni tichakurumidza kumuka tichinotsvagira vaenzi vedu kudya kwamangwanani paBraeside,” Merjury akapedzisa kutaura vachitsonyana maziso naLizzy zvisina kuonekwa naNhemia navaTinago. Nokudhakwa kwavakange vaita, varimi vaviri ava vakabva vangosvikorara hope dzedanda.
Kwave kuda kunoedza Lizzy akabatidza nharembozha yake achibva anyorera Merjury katsamba: “Iwe muka tiende, mari watora here?”
Ukuwo Merjury akatonge atononokerwa, aiziva kuti makombi anoenda kuEpworth akange atotanga kufamba kare. Vakanyahwaira kubuda mudzimba dzavainge varere vaine mazakwatira ohupfumi hwavakange vasina kushandira.
Nhemia ndiye akatanga kumuka semunhu akange ajaira kumusha kwaainovhurira zvipfuyo zvake kuti zviende kumafuro. Akapatika paakaona Lizzy asisimo asi akazorangarira kuti vakadzi ava vakange vambotaura zvokumukironotenga zvokudya.
Hana yake yakazobika manhanga paakabata-bata homwe dzebachi ndoukona kuti makange musisina kana kobiri pamari yose yaakange atengesa fodya. Akavhura mukova ndokuona kuti paive nedzimba dzakafanana dzakaita rundaza.Kuti achaziva makange murere vaTinago haana kukwanisa.Akatanga kudaidzira nenzwi riri pamusoro zvakavhundutsa nokumutsa vanhu vakange varere mudzimba dzakasiyana-siya.
“Nhai mukuwasha hamuzive here kuti pano paLodge, kune vamwe vachakarara. Taurirai pasi, muri kutsvaga ani?” akadaro mumwe mukadzi akafinyamisa kumeso achiratidza kusvotwa noruzha rwaNhemia.
“Handina basa nezvekuroja kwako pano ini, ndiri kutsvaga varidzi vemba vatakauya navo nezuro manheru,” akapindura Nhemia.
“Varidzi veLodge ino havagari pano, kana murikutsvaga madzimai amakauya nawo nezuro mukoma havagari pano,” akapindura mukomana aichengetedza paLodge apa.
Nhemia akabata musoro, akaramba akamira seasina zvaakange anzwa.
“Saka ivo vaya vatakuauya navo ndevekupi, handiti vakatitaurira kuti pano ndipo paimba pavo? Munozivana navo chete imi? Sei tisina kuita dambudziko rokupinda pano,” Nhemia akabvunza nenzwi rizere nehuturu hwehasha.
“Mukoma pano panouya vanhu vakasiyana-siyana vanobhadhara mari kuti vawane pokurara. Asi pane zvamashaya here?” ghadhi akabvunza.
“Ko isu inga hatina kubhadhara wani? Ndiyani akatibhadharira?” akabvunza Nhemia.
“Mukadzi mutsuku uya handiti akatanga iye kupinda ega achibva asvikonobhara mari yedzimba mbiri,” mukomana wepalodge akaedza kutsanangura.
“Ndinonotii kumudzimai wangu! Ndatobirwa mari yoseka ini!” murume akadaidzira zvakaita kuti vanhu vamuke mudzimba dzaive pamusha uyu.
Ari pakati pokuchema avawo vaTinago vakabva vabuda mumba mavaive vakapfeka mutodo chete vasina hembe, vachifambisa zvokuratidza kuti mukuru akange avhiringika.
“Aenda kupi mukadzi mutsvuku muridzi wepano, iwe ghadhi ndati amai vepano vaenda kupi?” mukuru akadaidizira nehasha.
“Baba ndozvandiri kuedza kutsanangurira mumwe wenyu kuti pano paLodge, panorara vanhu vakasiyana-siyana.Muchenjere kuti vakadzi vamakauya navo dzinogona kunge dziri pfambi,” akadaro gadhi.
Mukuru akaona rima richiuuya achibva ati pasi negotsi dhi-i achibva angofenda. Vakaedza kumufuridza kuti amuke asi zvakashaya basa. Mukuru wepalodge haana kuzotora nguva yakawanda achibva achaya nhare kumapurisa epaBraeside Police Station.
Mapurisa akasvikotora vaviri kuenda navo kukamba kuti vanotsanangura zvakange zvaitika. VaTinago vakatozopembenuka motokari yave kutosvika pakamba yamapurisa.Vakarondedzera mafambiro ose avakange vaita kusvika pavakazorara.
“E-e-eh baba newe munin’ina, ino inonzi Harare,” akarondedzera Inspector Chibwe, mukuru wamapurisa apaBraeside Police Station.
“Ndine urombo kuti vakadzi vakubirai mari yenyu ipfambi. Makanyeperwa kuti varikuenda nemi kumba kwavo ivo vachiziva zvavo kuti varikuenda nemi kulodge. Matsotsi haasisiri echirume chete. Vakadzi vazhinji vamunoyemura vachifamba vamwe vavo imbavha dzamakoko. Mbavha dzemuHarare dzave nenzira dzakasiyana-siyana dzokuba nadzo. Saka murikutaura kuti mari yose yamaive nayo yabiwa?”
“Hongu mwanangu, edza kutibatsira kuvatsvaga nokuti kana yebhazi yokuenda kumusha hatichina. Kumusha kwacho tinonotsanangura kuti mari yakabiwa sei?” vaTinago vakataura nenzwi raisirisa.
“Semapurisa, hongu ndiro basa redu rokubata mbavha, asi ndinovimba chiitiko ichi chakupai chidzidzo chikuru muhupenyu hwenyu. Handiti vakomana vanyora zvose padocket. Ndichakutakurai kunokusiyai paHarare Central Police Station ndinoziva kuti nhasi panemotokari inobuda kuenda kuChivhu. Ndichakukumbirirai kuti vakutakurei,” adaro inspector Chibwe.
Motokari yamapurisa okuBraeside yave kuda kupinda paHarare Central Police Station kubva munaKenneth Kaunda Avenue, VaTinago naNhemia vakaramba vakatarisa imba yokudyira iri pachiteshi chezvitima. Pfungwa dzavo dzakavadzorera kumashure vachifunga mazakwatira emari yavakange vabirwa. Hapana akakwanisa kutaura nemumwe, chavakakwanisa kurangarira mashoko avakuru anoti Ndakaziva Haitungamiri.